Mpanamboatra sobika tariby Wire - China Wire Baskets Factory
303 Series clip-on tery esory ny vatasaraketana harona fitetezana
Fampidirana: 303 Series clip-on tery esory ny vatasaraketana harona fitetezana. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 303
310 Andian-dahatsoratra mitaingina vatomamy lozika mihidy vy mihidy
Fampidirana:310 Andian-dahatsoratra mitaingina vatom-baravarana mihidy savoka malefaka mihidy. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
312 Series elliptical vy fisaka Chrome manintona mpantsaka harona tariby ho an'ny kabinetra ao an-dakozia
Fampidirana:312 Series elliptical vy fisaka Chrome manintona mpantsaka harona tariby ho an'ny kabinetra ao an-dakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 312
321 Andian-dahatsoratra miorina mitaingina vatasarihana harona vy ho an'ny valizy ao an-dakozia
Fampidirana:321 Andian-dahatsoratra miorina mitaingina vatasarihana harona vy ho an'ny valizy ao an-dakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 321
322 Andiany lehibe sy kely sosona roa sosona mitaingina harona vy tariby vy
Fampidirana: 322 Andiany lehibe sy kely sosona roa sosona mitazona vatomainty vatosoa vatasarihana lozoro ho an'ny lakozia lakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 322
325 Series lehibe & kely sosona roa sosona tendrombohitra fisaka harona vatasarety vatasarihana
Fampidirana: 325 Andian-dahatsoratra lehibe sy kely misy sosona roa misy rindrina mitaingina harona vy ho an'ny lalimoara an-dakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 325
331 Andiany roa sosona an-tendrombohitra sobika mihetsiketsika harona manintona vatasarihana
Fampidirana: 331 Andiany roa sosona an-tampon'ny harona vy mihetsiketsika mitaona vatasarihana ho an'ny lalimoara an-dakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 331
332 Series kabinetra ao an-dakozia eo an-tampon'ny harona tariby misintona vatasarihana
Fampidirana: 332 Series kabinetra ao an-dakozia eo an-tampon'ny harona tariby misintona vatasarihana ho an'ny lalimoara an-dakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 332
341 Andiana vy mitafo vy tariby lozisialy mitaona vatomamy misy zorony ho an'ny kabinetra ao an-dakozia
Fampidirana: Vatosoa vita amin'ny vy mihosotra vy 341 andiany mitaingina harona miaraka amin'ny fitoerany ho an'ny lalimoara an-dakozia. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 341
351 Andian-tsarimihetsika amina sisin-dambam-bokatra misy sisin-tany miafina 18 "
Fampidirana: 351 Andian-tsarimihetsika amina sisin-dambam-bokatra misy sisin-tany miafina 18 ". Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 351
401 Series 2 layer grid karazana Chrome mamoaka vatasarihana harona tariby miaraka amin'ny torolàlana amin'ny vatasarihana ambany
Fampidirana: 401 Series 2 layer grid karazana Chrome mamoaka vatasarihana harona tariby miaraka amin'ny torolàlana amin'ny vatasarihana ambany. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 401
402 Series gridwall misintona mpantsaka harona vy mihetsiketsika
Fampidirana: 402 Series gridwall misintona mpantsaka harona vy mihetsiketsika. Mora apetraka sy sariaka DIY izy ireo. Tsidiho ny tranokalanay hisafidianana izay andiany ilainao. Ny vokatray dia afaka namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Misy fanontaniana azafady mifandraisa aminay.
Item No. .: 402